Kubata Pa - DzeBonde Ed Rugwaro | KUSVIRA
Kubata Pa - Bonde Ed Rugwaro
Izvi zviri pasi apa zvinobatanidza ndezveKubata Pane akateedzana Zvepabonde Ed zvinyorwa zveAustralia zvedunhu reVictoria Comprehensive Zvepabonde Dzidzo. Izvo zvakagadzirirwa kuzivisa vabereki nezvezviri mukati meiyi kosi.
Manyoro acho ane mifananidzo yakajeka uye kurovedza kwakashata kunoshandiswa mumakirasi kudzidzisa vana nezve hupombwe hwevanhu. Mifananidzo iyo vabereki nevamwe vanotsigira saiti iyi vanoiona seyakagwinya zvachose, inozobatisa vana pazera ravanogona kungoratidza kutuka kufarira bonde, zvepabonde uye genitalia.
Aya manyorerwo ane dzidziso dzesainzi dzisina kuvhurika dzechikadzi dzinowanikwa mune zvakachengeteka Zvikoro zvinhu zvakadai seTiri Zvese uye Kodzero, Kusimba uye Kuremekedza hukama.
Kubata Pane Zvinhu Pano.
Dzvanya>Kubata PaBhuku Rekutanga.
Dzvanya>Kubata Pane Kwese Kwese. (Chikamu 1)
Dzvanya> Kubata Pane Kwese Kwese. (Chikamu 2)
Dzvanya> Yakachengeteka Zvikoro Nhungamiro.
Dzvanya>Kutaura Bonde Hutano.